Lapis Lazuli bụ lazurite - Feldspathoid silicate mineral - Video
Ihe kacha mkpa mineral bụ lazurite, mineral silicate feldspathoid. O nwekwara mgbakọ, sodalite, na pyrite. Ụfọdụ n'ime ụdị lapis lazuli nwere acg, diopside, enstatite, mica, hauynite, hornblende, nosean, na sulfur-rich lollingite geyerite.
Lapis lazuli na-emekarị na marble crystalline n'ihi nsonaazụ kọntaktị.
Ụdị acha anụnụ anụnụ na-acha ọkụ na-acha n'ihi na ọnụnọ nke trisulfur radical anion na crystal. Igwe eletrik nke otu eletrọn sitere na orbital nke okpukpu abụọ okpukpu abụọ kachasị dị elu n'ime ebe kachasị dị ala
Anyị na-ahụ Lapis lazuli na limestone na Osimiri Kokcha. A ndagwurugwu nke Badakhshan n'ógbè dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Afghanistan. Ebe ebe a na-edebe ihe ndị a na-edebe na Sar-e-Sang na-emeghe maka ihe karịrị afọ 6,000. Afghanistan bụ isi iyi lapis maka Ijipt oge ochie. Na obodo Mesopotamia, nakwa ndị Gris na ndị Rom ikpeazụ. Ndị Ijipt oge ochie nwetara ihe a site na ahia site na Afghanistan na Aryans. N'oge elu nke Ndagwurugwu Indus Valley banyere 2000 BC. E guzobere ógbè Harappan (Shortugai) na nso mines.
Dị ka ọkà mmụta ihe banyere ihe banyere ọgwụ bụ Sorbonne bụ Pierre Bariand si kwuo. Na-eduzi ọrụ na isi mmalite nke oge a. Na ntinye aka na Akpa Dị Oké Ọnụ Ahịa nke Afghanistan: Lapis Lazuli (2011) site na Lailee McNair Bakhtiar. A na - achọta ya na "ọgba", ọ bụghị na "nsị" omenala. Nkume lapis lazuli sitere na isi iyi nke ugwu Hindu Kush. Na ndagwurugwu Kochka nke Afghanistan.
Na mgbakwunye na ego ndị Afghanistan, anyị hụrụ lapis na Andes. Na nso nso Ovalle, Chile, na n'ebe ọdịda anyanwụ Ọdọ Mmiri Baikal na Siberia, Russia, na Tultui Lazurite ego. A na-enwekwa obere obere obere na Angola, Argentina, Burma, Pakistan, Canada, Italy, India, na United States na California na Colorado.
Na-eji ma na-etinye ya
Lapis na-ewere ezigbo polish. Anyị nwere ike iji ya na ọla, ihe osise, igbe, mosaics, ihe ịchọ mma, obere oyiyi, na vases. N'oge Renaissance, Lapis na-agbanye ala ma gbanwee iji mee ka ọkpụkpụ pigmenti. Maka iji mee ihe na frescoes na mmanụ. Ejiji ya dị ka pigmenti na mmanụ mmanụ na-ejedebe na mmalite nke 19th. Mgbe otu ụdị nke synthetic dị iche iche dị.
ịzụta eke lapis lazuli na ụlọ ahịa anyị